Kuunza mota kubva kuUAE kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Uri kutarisa kuendesa mota kubva kuUAE kuenda kuUnited Kingdom?
Isu tinobata maitiro ese ekupinza mota yako kubva kuUAE, kusanganisira kutumira, kuyedza uye kunyoresa mota. Tinogona kubata chero zera kana mhando yemotokari. Isu tiri nyanzvi mune izvi uye tinopa imwe yekumira shopu yekupinza mota yako.
Zvinyorwa zvedu kubva kuUAE zvinosanganisira zvese zvinodhura zvinobatanidzwa kupinza mota yako. Yedu makotesheni akazara akabatanidzwa uye akavakirwa zvachose pane zvaunoda. Unogona kuziva zvakawanda nezve nzira yekuunza mota yako pane ino peji, asi usazeze kupinda mukutaurirana uye utaure nenhengo yevashandi.
Kuwana mota yako kuUnited Kingdom
Isu tinotakura mota yako kubva kuJebel Ali uye vamiririri vedu vanobatsira neese RTA yekudzora kunyoresa. Isu tinogona zvakare kuronga inland marori kuenda kuchiteshi kune yakanyanya kukwikwidza mitengo. Kubva kuUAE isu tinotakura mota tichishandisa zvakagovaniswa midziyo, zvichireva kuti iwe unobatsirwa kubva pamutengo wakadzikiswa wekufambisa mota yako kuenda kuUK nekugovana midziyo nedzimwe mota dzevamwe vedu Tora mutengo nhasi uye uone mutengo wekupinza mota yako kubva kuUAE kuenda kuUK.
Yakawanda sei mutero yauchazoda kubhadhara kupinza mota yako?
Pakununura mota kubva kuUAE, kune nzira ina dzakasiyana dzekubvisa tsika muUK, zvinoenderana nemotokari mavambo, zera uye mamiriro ako.
Kana iwe ukapinza mota iyo yaigadzirwa kunze kweEU, iwe unobhadhara 20% VAT uye 10% basa
Kana iwe ukapinza mota iyo yakagadzirwa muEU, iwe unobhadhara 20% VAT uye £ 50 basa
Kana iwe ukapinza mota inopfuura makore makumi matatu ekuberekwa uye isina kunyatso kuchinjwa, iwe unobhadhara 30% VAT chete
Kana iwe uri kuenda kuUK, wakagara muUAE kwemwedzi gumi nemaviri kana kupfuura, uye uine mota kwemwedzi mitanhatu kana kupfuura, unogona kuendesa mutero mahara.
Kugadziriswa kwemotokari uye mhando yekubvumidzwa
Kune mota dzinobva kuUAE dziri pasi pemakore gumi, mota yako inofanirwa kutevedzera UK mhando yekubvumidzwa. Isu tinoita izvi tichishandisa iyo IVA bvunzo, izvo zvinosungirwa kuitira kuti unyoreswe. Neraki kune vatengi vedu, isu tine yega yakavhiyiwa IVA yekuyedza nzira munzira munyika, zvichireva kuti nguva yekutendeuka kuti mota yako inyoreswe yakaderedzwa zvakanyanya kupfuura chero kumwe kunhu.
Motokari yega yega yakasiyana uye mugadziri wega ane zviyero zvakasiyana zvekubatsira vatengi vavo kuburikidza nehurongwa hwekunze, saka ndokumbira utore chitauro kubva kwatiri kuti unzwisise zvinodiwa pamotokari yako.
Isu tinogadzirisa maitiro ese aya panzvimbo yako panguva yekugadziridzwa uye kuyedzwa, kunyangwe izvo zviri kubata nechikwata chekumiririra chemugadziri wemotokari yako kana kuyedza yako mota. Unogona kuvimbiswa mukuziva kuti iwe unozonyoreswa zviri pamutemo neDVLA munguva ipfupi inogoneka.
Kuruboshwe ruoko kutyaira mota kubva kuUAE kunoda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira izvo kune iyo yemwenje pateni yekudzivirira kupenya kweinouya traffic, iyo inomhanyisa kuratidza mamaira paawa kuverenga uye neseri mhute mwenje kana isati yatowirirana pasi rese.
Isu takabata nezve angangoita ese magadzirirwo uye mamodheru emota kubva kuUAE saka ndokumbirawo ubate kuti utaure nezve yako mota yekuisa.
Vanopfuura gumi-makore-makore mota vane mhando mvumo isingabhadharwe, asi zvichiri kuda MOT bvunzo uye zvimwe zvakagadziridzwa kune izvo zveIVA isati yanyoreswa. Izvo zvinogadziriswa zvinoenderana nezera asi zvinowanzo kuve kumwenje uye kumashure kwemambure emwenje.
Kana mota yako yapfuura makore makumi mana ekuberekwa haidi MOT bvunzo uye inogona kuunzwa yakananga kuUK kero yako isati yanyoreswa.
Nyaya 1 Land Rover